Ziziphi iindlela zokukhawulela i-backlink efanelekileyo kwiwebhusayithi yakho?
Ndingathanda ukuqala eli nqaku ngencazelo emfutshane ye-backlink kulabo abatsha kule sihloko. I-backlink yi-hyperlink engenayo ukusuka kwelinye iphepha ukuya kwelinye. Njengomthetho, ikhonkco ifakwa kwisicatshulwa kwaye ibonakala njengombhalo we-anchor. Ngokuchofoza kulo mbhalo, uya kwinqaku engcaciso okanye iwebhusayithi echazwe kulo mxholo. Ezi ngqamaniso zihlala zibonelela abasebenzisi ngolwazi oluncedo kwaye bancede abanikazi bewebhusayithi bathuthukise ii rankings zabo kwiwebhusayithi ukuba konke kwenziwe ngokuchanekileyo.
Eli nqaku lenzelwe ukukufundisa indlela yokufumana i-backlink efanelekileyo kwiwebhusayithi yakho. Ndingathanda ukukubamba ngezixhobo ozidingayo ukuze ufumane i-backlink engcono kwaye ukwandise ukufikelela kwakho.
Akukho zonke i-backlinks ezidalwa ngokufanayo. Yingakho kufuneka uqaphele kakhulu xa udibanisa isayithi lakho. Njengomthetho, i-backlink isetyenziselwa iinjongo ezimbini. Eyokuqala kukunceda iwebhusayithi ifumane ijusi yokukhangela esemgangathweni kwaye iphakanyise igunya lomnatha kwiwebhu. Okwesibini kukubangela ingozi ngokuzithandela kwiindawo ezikhuphisanayo okanye ngokungazenzisiyo.
Indlela yokwahlula i-backlink ephezulu?
Ngokuqhelekileyo, i-backlinks eziphezulu eziphezulu zizo zivela kwiindawo ezilungileyo zewebhu. Ezifanelekileyo kwaye zenziwe ngokusemthethweni. Abantu abaninzi abaqhagamshelana neendawo eziphezulu zezona ziphezulu, bhetele kubaluleke kakhulu kwisayithi yokukhangela injini. I-Google iza kujonga ezo zixhumanisi kwaye zihlawule isayithi edibeneyo kunye negama eliphezulu kunye nolwazi olungcono. Yiyo kanye into oyifunayo ukuyijonga kwisakhiwo sokuqhagamshelana.
Nangona kunjalo, njengoko ndithethile ngaphambi kokuba zonke i-backlinks zidalwe ngokulinganayo kwaye emva koko zide zonke zizuzisa ngokunjalo. Yingakho i-webmaster kufanele ikwazi ukuba yintoni enye i-backlink ephezulu.
Makhe sibhale ezinye zezinto ezibalulekileyo ze-backlink ephezulu, esemgangathweni:
echaphazelekayo kwi-website ye-website ephakanyisiweyo;
livela kumthombo wewebhu othembekileyo;
ithumela kwisithuthi esithumelayo;
ngokuchanekileyo efakwe kumxholo wesayithi;
ayihlawulwanga okanye iyahlawulwa;
inika i-PageRank yakho.
Ezi zikhonkwane eziphezulu ziyanzima ukuzenza. Kungenxa yoko baxabiswa kakhulu ngeenjini kunye nabasebenzisi. Ngaphezu koko, kufuneka ufumane unxibelelwano olunjalo kwimimandla eyahlukeneyo, kungekhona i-backlink 100 kwi-site ephezulu ye-PR. Gcina ukhumbule ukuba i-Google inokuqaphela xa uzama ukukopela inkqubo.
Ziziphi iindlela ezilula zokufumana i-backlink esemgangathweni kwisayithi lakho?
Into yokuqala okufuneka uyiqonde kukuba i-backlink kufuneka iwakhiwe, ingathengi. Isicwangciso soqhagamshelwano esilungileyo siya kusekelwe kumsebenzi onzima, kwaye konke oko. Ewe, uya kuchitha ixesha elide ukudala izixhumanisi ngokulinganayo. Nangona kunjalo, uya kuqinisekiswa ukuba unxibelelwano olunjalo luya kukunika iziphumo ezihlala zihlala zihlala njalo.
Kukho iindlela zokufumana i-backlinks esemgangathweni:
Ukuze ufumane i-backlink efanelekileyo, unokubeka igama lakho kunye nolwazi kwiinkcukacha eziphezulu ezilungiswe ngabantu. Kungenzeka ukuba kuya kufuneka uhlawule kwezinye zezi ngxelo. Nangona kunjalo, phambi kokulungelelanisa nayiphi na inkonzo yokwakha ikhonkco, kufuneka uqinisekise ukuba ayikho iwebhusayithi ye-spammy.
Olunye uhlobo lwezakhono zokuqhagamshelanisa unxibelelwano lukuba yindlalifa yeendwendwe. Bambisana ne-blog ejoliswe kwi-niche kwaye ushicilele khona ezinye izithuba ezonwabileyo nezibandakanyekayo kunye nezikhonkwane ezingenayo ezibhekiselele kwisayithi lakho Source .